संशोधनवाद र नवसाम्राज्यवाद वर्तमान विश्वको प्रमुख समस्या बनेका छन् - NepaliEkta
5 December 20195December 2019 Nepaliekta	0 Comments
मोनिका गार्टनर, संयोजक–क्रान्तिकारी पार्टी तथा संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन
क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय (आइसिओआर) का संयोजक मोनिका गार्टनर केही समयअघि नेपाल आउनुभएको थियो । नेपाल बसाइँका क्रममा हामीले गार्टनरसँग भेटेर विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ । आइसिओआरको गतिविधि, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था, नेपालको पछिल्लो अवस्थाप्रतिको मूल्याङ्कनलगायतका विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका थियौँ । प्रस्तुत छ, संयोजक गार्टनरसँग सुभास जिसीको सहयोगमा गरिएको कुराकानी :
० यहाँको नेपाल बसाइँ कस्तो रह्यो ?
– नेपालमा हामी एकदमै खुशी छौँ । भ्रमण एकदमै सफल भयो । अहिले छुट्टीका दिन थिए । यति सुन्दर देशमा बिदा मनाउने काम मात्रै नभएर सुन्दर मान्छेहरूसँग पनि भेटघाट भयो । मेरो नेपाल आगमन पाँचौँ पटक हो । नेपालमा तपाईहरूको न्यानो स्वागत र आतिथ्यताप्रति म आभारी छु ।
० यसअघि आउँदा र अहिले नेपालमा के कस्तो फरक पाउनुभयो ?
– नेपालमा भएको परिवर्तनदेखि म प्रभावित छु । त्यो परिवर्तन थुपै्र तहमा भएको छ । म यो भन्दा अघिल्लो पटक आउँदा यहाँ भारतको नाकाबन्दी थियो । त्यतिबेला भारत विरुद्व नेपालमा ठुलो जनमत पनि बनेको थियो र नाकाबन्दीले नेपालको जनजीवन धेरै नै प्रभावित बनेको थियो । अहिले नेपालमाथि भारतीय साम्राज्यवाद कमजोर भएको छ । हो, अहिले पनि भारतले नेपालका विरुद्व काम गर्न खोजेको छ । नयाँ बखेडा झिकेको छ । कालापानीलगायत क्षेत्र आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको छ । नेपालका सबै दल भारतको बखेडा विरुद्व सङ्घर्षरत छन् । यहाँसम्म कि काङ्ग्रेस पनि लागिरहेको छ । यो ठुलो परिवर्त हो र नेपालका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
अर्को कुरा, यहाँ मानिसको जीवनस्तरमा पनि कैयौँ परिवर्तन भएको छ । जनताको जीवनस्तर माथि उठेको छ । पहिलेको भन्दा प्रत्यक्ष शोषण घटेर गएको छ । मैले महिलाको क्षेत्रमा पनि केही सुधार भएको देखेकी छु । नयाँ संविधानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै कुरा समावेश गरेको छ । धेरै महिलाहरूले आफू आत्मनिर्भर बन्न खोजेको पाइयो । महिला हिंसाका विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन् । भइरहेको छ । यो सकारात्मक हो ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा एनजिओको ठुलो प्रभाव थियो । अहिले त्यो हटेको छ तर सरकारमा सरेको छ । पहिला एनजिओले गर्ने काम अहिले सरकारले नै गर्न थालेको छ । यो गलत हो ।
अर्कातिर, नेपालीमा निम्न पुँजीवादी चिन्तन बढेको पाएकी छु । अहिले मध्यमवर्गीय परिवारमा स्वार्थीपना विकास भएको छ । उनीहरू आफ्नोबारेमा मात्र सोच्छन् । मेरो छोरो यस्तो होस्, उस्तो होस्, बाहिर गएर पढोस्, धेरै पैसा कमाओस् भन्ने भावना बढेको देखिन्छ । वास्तवमा यसको सट्टा हामी सबैका लागि यी कुरा हुन् भन्ने हुनुपथ्र्यो । सामूहिकताको भावना हुनुपर्ने थियो । तर निम्न पु“जीवादी चिन्तनका कारण सामूहिकताको भावना घटेर गएको छ ।
० आइसिओआरको स्थापना कुन सन्दर्भमा कसरी भएको हो ?
– आइसिओआरको स्थापना २०१० अक्टोबर ६ मा भएको हो । यो धेरै नै आवश्यक थियो । थुप्रै देशका बिचमा गठबन्धन गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुलो तरलता थियो । विश्वमा सम्राज्यवादको खतरा अत्यन्त बढेर गएको थियो । त्यो बिचमा माक्र्सवादी–नेनिनवादीहरूको एउटा सम्मेलन भयो र त्यस्तो संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो तर खोलिएन ।
आइकोर संसारभरका क्रान्तिकारीहरूको साझा सङ्गठन हो । आइकोर आपसी सहयोग र सहकार्य गर्ने व्यावहारिक संस्था हो । हामी सैद्वान्तिक कुराहरूमा छलफल गर्छौं र सहमति भएका विषयमा सहकार्य गरेर काम गर्छौँ । साम्राज्यवाद विरुद्ध विश्वप्यापी रूपमा सङ्घर्षलाई एकीकृत गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । त्योसँगै हामीले समग्र वातवरणीय रक्षाको लागि पनि देशलाई सजग सचेत बनाउँदै वातावरण विनास विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा काम गर्छौँ ।
अहिले आइकोरमा सदस्यको सङ्ख्या बढिरेको छ । ४९ देशका ५८ वटा सङ्गठन यसका सदस्य छन् । अहिले पाँच वटा महादेशमा सङ्गठन छ ।
आइकोरको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक क्रान्ति हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने साझा सङ्गठन हो । सुरुमा आइकोर कोअर्डिनेसन समिति मात्रै हो । तर भविष्यमा कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय चाहिन्छ । विश्वभरिका कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी हुने छन् । अहिलेका लागि हामीले राजनीतिक पार्टी र विचारधारा निर्माण गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । बुर्जुवा साहित्य, निम्न पुँजीवादी चिन्तनको विरुद्वमा लडिरहनुपरेको छ । यो गाह्रो छ तर लड्नुपर्छ ।
अहिले विभिन्न देशहरूमा क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढेको छ । अहिले राष्ट्रिय क्रान्ति बढेको छ । साम्राज्यवादी देशमा एउटै स्टेपमा समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । जसरी साना साना खोलाहरू मिलेर विशाल नदी बन्छ, त्यसरी नै विश्वभरका देशमा रहेका क्रान्तिकारी पार्टी तथा सङ्गठनले एउटै कोअर्डिनेसन बनाएका छन् । त्यो हो– आइकोर ।
० अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल अन्तरविरोध के हो भन्ने लाग्छ ?
– अहिले साम्राज्यवादीहरूले संसारभर खतरा बढाइरहेका छन् । साम्राज्यवाद आफैमा खतरा र नराम्रो हो । यो आफैमा सङ्कटग्रस्त छ । आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय हरेक रूपमा यो खतरा बनेर देखिएको छ । संसारभरका जनताको मुख्य अन्तरविरोध अहिले साम्राज्यवादसँग नै हो ।
साम्राज्यवादी देशका आपसी टकरावका कारण तेस्रो विश्वयुद्व वा अर्को युद्व हुन सक्ने सम्भावना पनि छ र अहिले नयाँ साम्राज्यवादी देश पनि उदाउँदै छन् । उनीहरूको बिचमा प्रतिष्पर्धा र अन्तरविरोध बढेको छ । यसरी नै साम्राज्यवाद अगाडि बढ्दै गयो भने प्रकृति, वातावरणमा धेरै कष्ट पु¥याउँछ । बेरोजगारी बढाउँछ । यो स्थितिमा हामीले हाम्रा देशमा मात्रै आन्दोलन अगाडि बढाएर पुग्दैन । त्यसैले विश्वप्यापी रूपमा क्रान्तिकारी सङ्गठन विश्वस्तरमै एकीकृत भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैको परिणाम हो– आइकोर ।
हामीले यो ध्यान दिएका छौँ कि दुईवटा कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एक– राष्ट्रिय रूपमा सङ्गठन र वर्गसङ्घर्ष† दोस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घर्ष । त्यसकारण देशमा पार्टीलाई व्यवस्थित पार्ने र वर्गसङ्घर्ष अगाडि बढाउने कामसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सङ्घर्षलाई पनि ध्यान दिएका छौँ ।
संसारको प्रमुख समस्या संशोधनवाद र नयाँ साम्राज्यवादी देश नै हुन् । यदि तपाईले नवसाम्राज्यवादी देशको विषयमा बुझन सक्नुभएन भने त्यसले भविष्यमा धेरै नै असर पु¥याउँछ । यो धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा हो कि तपाईहरूको पार्टी नेकपा (मसाल) ले आफ्नो महाधिवेशनबाट भारतलाई साम्राज्यवादी देशको रूपमा घोषणा गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा यो थियो कि यो विषयमा तपाईहरूले खुल्ला छलफल चलाउनुभयो । तपाईहरूले पहिला भारतलाई विस्तारवाद भन्नुभएको थियो । यो एउटा नीति मात्रै हो । भारतले आर्थिक र भौतिक रूपमा आफ्नो साम्राज्यवादलाई नेपालमा लादिरहेको छ । तपाईहरूले गरेको यो निर्णय विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै महत्वपूर्ण पाठ हो ।
नवसाम्राज्यवादको विषय संसारभर नै छलफलको विषय हो । आइकोरले अहिले विश्वभर नै नवसाम्राज्यवादको रूपमा छलफल चलाइरहेको छ । नेकपा (मसाल) ले दिएको सुझाव आइकोरलाई महत्वपूर्ण हुन्छ ।
० तपाईहरू साम्राज्यवाद विरुद्ध विश्वभरि नै सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । नेपालमाथि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप कस्तो पाउनुभएको छ ?
मैले माथि पनि भनेँ कि नेपालमा भारतले आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न बेलाबेलामा कयौँं बखेडा झिक्ने गरेको छ । तर यहाँ भारत मात्रै होइन, अरू पनि साम्राज्यवादी देशहरूले चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालमा साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन् । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्न ठुलो मात्रामा रकम लगानी गरेको छ ।
हरेक साम्राज्यवाद देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका लागि खतरा हो । यो राम्रो होइन कि भारत पछाडि हट्छ र अमेरिका अगाडि बढ्छ । यहाँ चीन पनि छ । यो पनि साम्राज्यवादी देश हो । चीनले आफ्नो साम्राज्यवाद कायम गर्न नेपालीले चाहेअनुसार काम गरिरहेको छ । रेल, बाटो नेपालका लागि सही छ । नेपालीले पैसा तिर्नुपरेको छैन । तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपाल चाइनामा निर्भर होस् । यदि यो चाइनाको साम्राज्यवादी पोलिसी हुँदैनथ्यो, यहाँ वातावरणीय प्रभावको पनि काम गर्नुपथ्र्यो । तर चीनले भौतिक काममा मात्रै ध्यान दिएको छ । त्यो पनि आफ्नै जनशक्ति ल्याएर र यदि चीनको नेपालमा समाजवादी नीति हुन्थ्यो भने उनीहरूले चिनियाँलाई लिएर भन्दा पनि नेपालीलाई सिकाएर काम गराउने थिए । त्यसका साथै भौतिक निर्माण मात्रै होइन, नेपालमा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने काम र सिप नेपालीलाई पनि दिने थिए । नेपालले यस्तो कुराबाट साम्राज्यवादी नीति कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । माओले भनेका छन्– यदि तिम्रो घरमा बाघ छ भने बाघसँग लडेर घरबाट निकाल्न त सक्छौ तर ब्वाँसो भित्र छिर्न सक्छ । त्यसकारण नेपालीहरूले चाइनाको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । जुनसुकै बहानामा आए पनि हरेक साम्राज्यवादले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याउँछ । तसर्थ नेपाल सधैँ चनाखो रहनुपर्छ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।
० विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेका बेला नेपालमा भने हँसिया–हथौँडाको झण्डा बोक्नेहरूले नै बहुमतका साथ सत्ता चलाइरहेका छन् । यो घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– अहिले विश्वभरि नै ध्रुवीकरण छ । विश्व दक्षिणपन्थतिर ढल्किरहेको छ । यो ध्रुवीकरणबाट विश्वभरका धेरै मुलुक प्रभावित छन् । विश्वभर उनीहरूको बहुमत छ । तर नेपालमा कम्युनिस्टलाई जनताले साथ दिएका छन् । यस्तो विश्वभर कहिँ पनि छैन, जहाँ कम्युनिस्ट भनिएकालाई भोट गरेर सत्तामा पु¥याइएको होस् । तर मलाई लाग्दैन कि नेपाली जनताले अहिलेको सत्तारूढ दललाई राम्रोसँग चिनेर भोट दिएका हुन्, बरु नेपालमा सत्ता चलाइरहेको दल नेकपा दक्षिणपन्थी पार्टी हो । उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेकाले नै जनताले भोट दिएका हुन् । कम्युनिस्ट नाम भएकै कारणले यो सरकारमाथि दक्षिणपन्थीहरूले हमला गर्छन् । हामीले हमलाको सामना गर्नुपर्छ र जनतालाई यिनीहरू समाजवादी होइनन् भन्ने बुझाउनुपर्छ । यो विश्व दृष्टिकोण हो । सही कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
हामीले जनताको स्तरमा यो बुझाउन पनि चुनावमा भाग लिनुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ । हामीले त्यसो गरेनौँ भने जनतामा सही कम्युनिस्ट को हो भन्ने भ्रम पर्छ । यिनै दक्षिणपन्थीहरूलाई जनताले कम्युनिस्ट ठानिरहे भने यिनीहरूकै व्यवहारका कारण हामी कम्युनिस्ट चाहन्नौँ भन्न सक्छन् ।
तपाईलाई उदाहरण दिऊँ । पूर्वी जर्मन (जर्मन गणतन्त्र) मा तत्कालीन रुलिङ पार्टीले आफूलाई समाजवादी बताउँथ्यो । तर उनीहरू वास्तविक समाजवादी नभएका कारण कम्युनिस्ट आचरण देखाउन सक्ने कुरा भएन र देखाउन सकेनन् । अनि जनताले यस्तो समाजवाद चाहन्नौँ भनेर सङ्घर्ष गरे । उनीहरूकै कारण जनतालाई कम्युनिस्ट आचरण बुझाउन हामीलाई ३०÷४० वर्ष लाग्यो । त्यसकारण हामीले जनतालाई के समाजवाद हो र होइन भन्ने कुरा सूचित गराइरहनुपर्छ र हामीले प्रशिक्षण दिइरहनुपर्छ ।
० अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । यसको असरलाई कम गर्न यहाँहरूका योजना के छन् ?
– आइकोरले यसलाई खालि जलवायु परिवर्तन मात्रै भनेको छैन, यसमा धेरै वातावरणीय समस्या छन् । समुद्रमा विषको मात्रा बढेको छ । ओजोनको तह घटेको छ । वनजङ्गल बिनास वढेको छ । त्यसकारण हामीले जलवायु परिवर्तनभन्दा पनि वातावरणीय समस्याको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । मैले वातावरणमा ठुलो समस्या देखिरहेको छु । वातावरण रक्षाका लागि सरकार र दलहरूले खासै राम्रो भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । ट्राफिक चाप, हावा, पानी प्रदुषित हुने समस्यालगायत थुप्रै वातावरणीय समस्या बढेर गएका छन् । हाम्रो सुन्दर भविष्यका लागि यी सबै कुरा महत्वपूर्ण हुन् ।
आइकोरको तेस्रो महाधिवेशनमा हामीले हामी संलग्न राष्ट्रले वातावरणीय समस्यालाई आन्दोलनका रूपमा लैजान नसकेकोमा आत्मालोचना गरेका थियौँ । केही समयअघि आइकोरले वातावरणको सन्दर्भमा एउटा ठुलो कार्यक्रम गरेको थियो । त्यो कार्यक्रममा सबै सदस्य राष्ट्रहरू सहभागी थिए । हामीले वातावरणीय समस्या समाधान गर्ने मात्रै नभएर वातावरणको संरक्षण र संबद्र्वन गर्ने सन्दर्भमा त्यसवाट निस्कन सक्ने अन्य समस्या, जस्तो– बेरोजगारीलगायतका विषयमा छलफल गरेका थियौँ । अहिले विश्वभर चलिरहेको ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ (भविष्यका लागि शुक्रबार) भन्ने युवा विद्यार्थीको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छौँ । त्यस दिन उनीहरू स्कुल जाँदैनन् र वातावरण संरक्षणका लागि रोडमा प्रदर्शन गर्छन् । आइकोरका सबै सदस्य राष्ट्रले वातावरणको संरक्षणमा मात्र गर्नुपर्छ । समाजवाद स्थापानाका लागि पनि राम्रो वातावरण चाहिन्छ ।
० जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी (एमएलपिडी) को अवस्था कस्तो छ, हामी जान्न सक्छौ“ ?
– साम्राज्यवादी देशमा माक्र्सवादी पार्टी चलाउनु धेरै नै कठिन कार्य हो । एमएलपिडीले समाजमा नयाँ भूमिकाका साथ काम गरेको छ । हामीले त्यहाँ ठुला ठुला काम गर्छौं तर मिडियाले सपोर्ट गर्दैनन् । हामीले झण्डै ५० वर्षयता निकै काम गरिरहेका छौँ र देशव्यापी रूपमा पार्टीको कुनै न कुनै प्रभाव छ । ठुला शहर र महत्वपूर्ण उद्योगमा पनि सङ्गठन बनाएका छौँ । त्यहाँका बुर्जुवाले कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधि गर्छन् । प्रतिक्रियावादीले गरेको हर्कतका कारण पनि जनताले हामीलाई बुझ्न थालेका छन् । एमएलपिडीले संसारका ८०० वटा पार्टी र संस्थासँग सम्पर्क राखेको छ । यो समयमा एमएलपिडीले महत्वपूर्ण सैद्वान्तिक कुरामा पनि आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र युवा लक्षित कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेको छ । १९६८ मा जर्मनीमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने १६० वटा सङ्गठन तथा पार्टी थिए । अहिले एउटै मात्र छ ।
० अन्तमा केही छ कि ?
– म तपाईहरूको पार्टीबाट एकदमै प्रभावित छु । म आशा गर्दछु कि हामी झन्पछि झन् नजिक रहेर काम गर्ने छौँ । नेकपा (मसाल) आइकोरमा अझै धेरै सक्रिय रहने छ । आईकोरलाई प्राथमिकता दिने छ र प्रतिक्रिया दिइरहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको दिवसमा सहभागी हुने छ, जसका कारण विश्वले नै मसालका अन्तर्राष्ट्रिय कामबाट जानकारी लिने छ ।
मसालका सबै नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई सफल जीवनको शुभकामना । साथै तपाईको प्रिन्ट मिडिया र अनलाइन ‘युगदर्शन’ लाई पनि शुभकामना ।
← निर्मलाकी आमालाई
विद्यालयका कथा व्यथा →